सुन्दर जिरी ! मनमोहक च्योर्दोङ्ग - chyordong.com
सगरमाथाको प्रवेशद्वार, नेपालको स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता उपनामहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बृत्तमा चर्चित दोलखाको सुन्दर नगरी जिरी नेपालकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य मध्यमा पर्दछ । तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले जिरी हुँदै सगरमाथाको पहिलोपटक सफल आरोहण गरेपश्चात हजारौं पर्यटकहरुले यहि मार्ग हुँदै सगरमाथाको शिखर चुमिसकेका छन् । बरिष्ठ स्वीस भुगर्भविद टोनी हेगनले भौगोलिक अवस्थाको आधारमा जिरीलाई ज्युरिच सहरसंग तुलना गरेका छन् ।
हिमाली नगरपालिका जिरी प्राकृतिक, धार्मिक र साँस्कृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले अत्यन्तै धनि छ । यहाँ झरणा, गुफा, पोखरी, खोलानाला, कोणधारी हरिया बनजंगल साथै अग्ला डाँडाकाँडा देखि सुन्दर उपत्यकाहरु छन् । आर्कषक गुम्बा, छोर्तेन, मठमन्दिर तथा चर्चहरु प्रशस्त रहेका छन जहाँ विभिन्न समयमा ठुलाठुला मेलाहरु लाग्ने गर्दछ । यहाँका आदिबासी जिरेल, शेर्पा, तमाङ, सुनुवारहरुको पृथक कला संस्कृति, भेषभुषा र स्थानीय खाद्यपरिकारहरु छन् जुन जिरीको पर्यटकीय आर्कषणको रुपमा रहेको छ । जिरीका केहि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरु मध्य च्योर्दोङ अग्रपंतिमा आउँछ ।
समुन्द्रि सतहबाट ३७०० मिटर उचाईमा रहेका च्योर्दोङ हिन्दु र बौद्ध धर्मालम्वीहरुको साझा तिर्थस्थल पनि हो । यहाँ रहेको महादेवको मन्दिरमा हजारौ त्रिशुलहरु चढाईएको छ । अविर, ध्वजा तथा खादाहरुले मन्दिर सिंगारिएको छ भने बौद्ध धर्मालम्वीहरुको पवित्र लुङदर अग्ला अग्ला खाँवाहरुमा टाँगिएको छ । यस मन्दिरमा पुजाआजा गरेमा रोग व्याधि नलाग्ने, पशु चौपायालाई जंगली जनावरले दुखः नदिने जनविश्वास रहेको छ । बैशाख १ गते नयाँवर्षमा र कार्तिक पुर्णिमा मा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ ।
कसरी पुग्ने ः
जिरी लिङ्गन बजारबाट करिव ६ घण्टाको उकालो हिडेपछि च्योर्दोङ पुग्न सकिन्छ । च्योर्दोङ पदयात्रामा क्रममा पाईने सुनखरी, लालिगुराँस, चिमाल र ठिंग्रेको घना जंगल र त्यसमा पाईने वन्यजन्तुहरुले यात्रालाई थप मनोरन्जन प्रदान गर्दछन् । लिङ्कन बजारबाट स्तुपा, गोकुलगंगा पार्क, रमिते डाँडा, पटासे हुँदै ३ घण्टा उकालो चढेपछि क्याङसे पुगिन्छ । यहाँ पुगेपछि च्योर्दोङ यात्राको आधा बाटो हुन्छ । क्याङसे सम्म रातमाटे, कुथामे, जोरमाने हुँदै मोटरबाटो बाट पनि जान सकिन्छ । क्याङसेमा एउटा सुन्दर, स्वच्छ र सफा पोखरी छ । पोखरी वरपर गुँरासका टन्नै रुखहरु छन् यद्यपी त्सका कुनै पातहरु पोखरीमा देखिदैन । पौराणिक किम्वदन्ती अनुसार रुखका पातहरु पोखरीमा खस्नसाथ चराहरुले टिपेर बाहिर फाल्ने गर्छन र पोखरीलाई सफा राख्छन् एवं यस पोखरीमा धुप धुवाँर गरेर उकालो लाग्दा आकाश खुला हुने र पानी नपर्ने जनविश्वास पनि छ । क्याङसे क्षेत्र विश्राम र क्याम्पिङ को लागि उपर्युक्त रहेको छ । यहाँबाट नुम्बुर हिमाल अगाडि देखिन्छ । पोखरी संगै नुम्बुर हिमाल र तल यलुङ उपत्यका, जिरी उपत्यकाको राम्रो फोटो खिच्न सकिन्छ । क्याङसेमा रहेको चौरीगोठहरुमा दुध, मोहि र चुर्पिहरु किन्न पाईन्छ ।
के लाने ः
के गर्ने ∕ के नगर्ने ः
च्योर्दोङमा रात विताउने भए दाउरा नजिकै भएकोले क्याम्पफायर पनि गर्न सकिन्छ तर मासु पोलेर खानु राम्रो मानिदैन । मासु पोल्नाले पानी पर्ने, हावाहुरी चल्ने र चट्टयाङ पर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । साथै अत्याधिक होहल्ला गर्ने, फोहोर गर्ने र वातावरण एवं वन्यजन्तुलाई असर गर्ने खालका क्रियाकलाप पनि गर्नुहुदैन । यो गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पर्यावरणमा असर गर्ने क्रियाकलापलाई निषेध गरिएको छ । कुहिने खानेकुराहरु वढि भएमा व्यवस्थित तरिकाले त्यही छोड्दा हुन्छ । चरा तथा वन्यजन्तुहरुले खान्छन् । तर प्लास्टिक, बोतल, कागज लगायत अन्य नकुहिने फोहोरहरुलाई आफैले फर्काएर ल्याउनुपर्छ । बातावरणिय हिसावले सकेसम्म नजलाउँदा राम्रो हुन्छ । क्याम्पिङ परिसर र बाटोघाटो सफा राख्नुपर्छ ।
TagsArt Chyordong Hiking Jiri Mt. Gaurishanker Numbur Tourism
पुर्वसभामुख महरालाई पत्नी शोक